बाबुराम भट्टराईको कटाक्ष ओली समूहविरुद्ध : खसीको टाउको छिनाली सकेपछि केही बेर पुच्छर फिटीफिटी गरेजस्तै – Khabar Patrika Np
बाबुराम भट्टराईको कटाक्ष ओली समूहविरुद्ध : खसीको टाउको छिनाली सकेपछि केही बेर पुच्छर फिटीफिटी गरेजस्तै
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ०१, २०७८ समय: १८:१०:०२
ओली समूहविरुद्ध बाबुराम भट्टराईको कटाक्षः पुच्छर केही बेर फिटीफिटी!
काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहविरुद्ध कडा कटाक्ष गरेका छन्।
ओली सत्ताच्युत भइसकेपछि सडकमा प्रदर्शन तथा लुम्बिनी प्रदेशमा गरिएको संसद् अधिवेशन अन्त्य– खसीको टाउको छिनाली सकेपछि केही बेर पुच्छर फिटीफिटी गरेजस्तै भएको टिप्पणी डा. भट्टराईले गरेका हुन्।
‘खसीको टाउको छिनाली सकेपछि पनि पुच्छर केही बेर फिटीफिटी गर्छ,’ विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध डा. भट्टराईले शुक्रबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ओलीको बहिर्गमनपछिको सडक तमासादेखि लुम्बिनी प्रदेशको जात्रासम्म हेर्दा त्यही पुष्टी हुन्छ।’
आफू सत्ताको नेतृत्वनमा नरहे आकाशै खस्छजस्तो गर्ने ओली प्रवृत्ति हिटलरी तानाशाहसँग मिल्दोजुल्दो भएको आक्रोश पनि उनले पोखेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘आफू कुर्सीमा नरहे आकाशै खस्छ भन्ने ओली प्रवृत्ति हिट्लरी नाजीवाद/फासीवादसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसले अन्त्यमा सपरिवार आत्महत्या गरेथ्यो।
यो पनि हेर्नु
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेका चालकका लागि सरकारले छुट्टै लाइसेन्स जारी गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायल पास गरेकाे सुरूकाे एक वर्ष अवधिका लागि क्यूआर कोडसहितको छुट्टै कार्ड जारी गर्न लागेको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी लाेकनाथ भुसालले यस्ताे कार्ड परीक्षणकाे क्रममा रहेकाे र अब ट्रायल पास गर्ने नयाँ चालकका लागि वितरण गरिने जानकारी दिए ।
‘विभागले पीभीसी कार्ड परीक्षण गरिरहेकाे छ । अब ट्रायल पास गर्ने चालकलाई एक वर्षसम्मको परीक्षण अवधि तोकेर पीभीसी कार्ड वितरण गर्नेछौं,’ उनले भने ।
ट्राफिकले क्युआर कोडका आधारमा चालककाे लाइसेन्स जाँच गर्ने विभागले जनाएकाे छ । कार्डमा चालकको सम्पूर्ण आवश्यक विवरण ट्राफिकले आफ्नो मोबाइल फोनमार्फत थाहा पाउनेछन् ।
याेसँगै विभागले दुई प्रकारको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्नेछ । ट्रायल उत्तीर्ण गरेका चालकलाई परीक्षणकाल (प्रोभिजनल) र परीक्षणकाल उत्तीर्ण भएका चालकलाई स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिनेछ ।
हाल काेराेना महामारीका कारण ट्रायल र नयाँ लाइसेन्स आवेदन बन्द छ । ‘हामी सीसीएमसीको आधिकारिक निर्णय कुरिहेका छौं । स्कुल, कलेज खुलेलगत्तै नयाँ लाइसेन्स आवेदन खुलाउने र ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको अनुमति दिने छौं,’ भुसालले भने ।
यसपछि ट्रायल पास गर्ने चालकलाई एक वर्षका लागि पीभीसी कार्ड दिने विभागकाे याेजना छ ।
विभागका अनुसार पीभीसी कार्डमा स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तो चिप हुँदैन । पीभीसी कार्डमा ‘बार कोड’ हुन्छ । बारकोडमा सवारी चालकको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरिएको हुन्छ । प्रहरीले बार कोड स्क्यान गर्ने बितिकै त्यो अनुमतिपत्र नक्कली हो या सक्कली भन्ने थाहा पाउँछन् ।
त्यसैगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका व्यक्तिलाई नयाँ स्मार्ट अनुमतिपत्र प्राप्त नहुञ्जेलसम्म यस्ताे कार्ड वितरण गरिनेछ ।